Bhuku Rekutanga raSamueri 4:1-22
VaFiristiya vanotora Areka (1-11)
Eri nevanakomana vake vanofa (12-22)
4 Zvino shoko raSamueri rakasvika kuvaIsraeri vese. VaIsraeri vakabva vaenda kunorwa nevaFiristiya; vakadzika musasa pedyo neEbhenezeri, uye vaFiristiya vakanga vakadzika musasa muAfeki. 2 VaFiristiya vakaronga mauto avo kuti vasangane nevaIsraeri, asi zvinhu hazvina kufambira zvakanaka vaIsraeri pakurwa kwacho, zvekuti vakakundwa nevaFiristiya, avo vakauraya varume vanenge 4 000 kusango kwavairwira. 3 Vanhu pavakadzokera kumusasa, vakuru vaIsraeri vakati: “Nei Jehovha atirega tichikundwa* nhasi nevaFiristiya?+ Ngatinotorai areka yaJehovha yesungano kuShiro,+ kuti tive nayo kuno itiponese paruoko rwevavengi vedu.” 4 Saka vanhu vakatuma varume kuShiro, vakanotora areka yesungano yaJehovha wemauto, uyo agere pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi.+ Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi,+ vakanga varipowo vaine areka yesungano yaMwari wechokwadi. 5 Areka yesungano yaJehovha payakangopinda mumusasa, vaIsraeri vese vakashevedzera kwazvo, zvekuti pasi pakazunguzika. 6 VaFiristiya pavakanzwa ruzha rwekushevedzera kwacho vakati: “Nei vanhu vari mumusasa wevaHebheru vari kushevedzera kudaro?” Vakazoziva kuti Areka yaJehovha yakanga yapinda mumusasa. 7 VaFiristiya vakatya, nekuti vakati: “Mwari apinda mumusasa wacho!”+ Saka vakati: “Pedu papera, nekuti zvinhu zvakadai hazvisati zvamboitika! 8 Pedu papera! Ndiani achatiponesa paruoko rwaMwari uyu ane simba? Uyu ndiye Mwari akauraya vaIjipiti nenzira dzakasiyana-siyana murenje.+ 9 Imi vaFiristiya, shingai muite sevarume, kuti murege kuva varanda vevaHebheru sezvavakanga vakaita kwamuri.+ Itai sevarume murwe!” 10 Saka vaFiristiya vakarwa, vaIsraeri vakakundwa,+ mumwe nemumwe akatizira kutende rake. Vakawanda kwazvo vakaurayiwa; varwi 30 000 vaifamba netsoka vevaIsraeri vakafa. 11 Uyewo Areka yaMwari yakatorwa, vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi, vakafa.+ 12 Mumwe murume wedzinza raBhenjamini akamhanya achibva kwairwiwa, akasvika kuShiro zuva iroro, aine nguo dzakabvaruka uye aine guruva mumusoro make.+ 13 Murume wacho paakasvika, Eri akanga akagara pachigaro parutivi rwemugwagwa achimirira, nekuti mwoyo wake wainetseka chaizvo nezveAreka yaMwari wechokwadi.+ Murume wacho akapinda muguta kuti ataure zvakanga zvaitika, uye guta rese rakatanga kuridza mhere. 14 Eri paakanzwa kuchema kwacho, akabvunza kuti: “Mheremhere iyi ndeyei?” Murume uya akamhanya kunoudza Eri zvakanga zvaitika. 15 (Panguva iyi Eri akanga ava nemakore 98 uye maziso ake akanga akangovhurika asi asisaoni chinhu.)+ 16 Murume wacho akabva ati kuna Eri: “Ndini ndabva kunzvimbo iri kurwiwa! Ndatotiza nhasi chaiye kubva ikoko.” Iye akabva abvunza kuti: “Chii chaitika, mwanakomana wangu?” 17 Saka murume akauya neshoko akapindura kuti: “VaIsraeri vatiza vaFiristiya, uye vanhu vakundwa zvisingaiti;+ uyewo vanakomana venyu vaviri, Hofini naFiniyasi vafa+ uye Areka yaMwari wechokwadi yatorwa.”+ 18 Paakangotaura nezveAreka yaMwari wechokwadi, Eri akadonha pachigaro negotsi padivi pegedhi, akatyoka mutsipa ndokubva afa, nekuti akanga akwegura uye aiva mukobvu. Akanga atonga Israeri kwemakore 40. 19 Muroora wake, mudzimai waFiniyasi, aiva nepamuviri uye akanga ava pedyo nekusununguka. Paakanzwa shoko rekuti Areka yaMwari wechokwadi yakanga yatorwa uye kuti tezvara vake nemurume wake vakanga vafa, akabva akotama achirwadziwa nepamuviri, ndokusununguka. 20 Paakanga ava kufa, vakadzi vakanga vakamira pedyo naye vakati: “Usatya, nekuti wabereka mwanakomana.” Iye haana kupindura uye haana kuzviteerera.* 21 Asi akatumidza mukomana wacho kuti Ikabhodhi,*+ achiti: “Kukudzwa kwabva pakati paIsraeri, kwatapwa,”+ achitaura nezvekutorwa kweAreka yaMwari wechokwadi uye zvakaitika kuna tezvara vake nemurume wake.+ 22 Akati: “Kukudzwa kwabva pakati paIsraeri, kwatapwa, nekuti Areka yaMwari wechokwadi yatorwa.”+
^ ChiHeb., “Nei Jehovha atikunda?”
^ Kana kuti “uye haana kuisa mwoyo wake pazviri.”
^ Kureva kuti “Kukudzwa Kuri Kupi?”